Ku-gambasho: waa maxay, qeexitaan iyo tusaalooyin ku saabsan ifafaalaha | Saadaasha Shabakadda
Saadaasha hawada waxaa muhiim ah in la barto isbedelada jireed ee jawigu ku socdo waqtiga dhabta ah si loo saadaaliyo waxa dhici doona. Jawiga waa meel dhexdhexaad ah oo dhaqdhaqaaqyo badani ay si fudud u dhacaan. Sidan oo kale, isweydaarsiga kuleylka ee dhaqdhaqaaqa toosan iyo toosan ayaa loo oggol yahay. Gaadiidka jiifka ah ee kuleylka tirada kale ee jirka ee ay dabayshu leedahay waxaa loo yaqaan 'advection'. Adveve waa hadafka maqaalkan.
Waxaan falanqeyn doonaa muhiimada ay leedahay in la ogaado xarafka ku jira jawiga si aan u ogaano saadaasha hawada iyo isbadalka cimilada. Marabtaa inaad waxbadan kabarato? Kaliya waa inaad sii wadataa akhriska 🙂
1 Waa maxay calafku
2 Sifooyinka sifaynta
3 Sababaha keena uumiga
4 Qaboojinta Adiabatic
5 Isbeddelka heerkulka sababo la xiriira
Waa maxay calafku
Saadaasha hawada aad ayey caan u tahay in la isticmaalo ereyga gudbinta si loogu tilmaamo dhaqdhaqaaqyada taagan. Qiimaha xawaaraha dhaqdhaqaaqyadani guud ahaan kama badna illaa boqol meelood oo dhaqdhaqaaqa jiifka ah. Sidaa darteed, waa la ogaan karaa in daruuraha tooska u koraya ay si tartiib tartiib ah u sameysmeen oo awood u leh inay qaataan ilaa maalin dhan.
Dhaqdhaqaaqa jiifka ah ee cufnaanta hawadu wuxuu ku dhacaa baaxad weyn adduunka oo dhan. Waa midka ka soo qaada tamarta kuleylka gobollada kuleylaha ilaa aagagga cirifka. Waxay awood u leeyihiin inay tamar ka gudbiyaan dhinac ka mid adduunka ilaa dhinaca kale, iyagoo ku safraya kumanaan kiilomitir. Waa gaadiidkan jiifka ah midka xaraashka ah waana mid aad uga muhiimsan ugana adkaysi badan socodka hawada taagan.
Saadaasha hawada iyo badweynta jirka, xayeysiinta waxaa badanaa loo gudbiyaa u rarida qaar ka mid ah hantida jawiga ama badda, sida kuleylka, huurka ama cusbada. Sahaminta saadaasha hawada ama badda ayaa la socota dusha sare ee 'isobaric' dusha sare sidaas darteedna badiyaa waa siman yihiin. Waxay la macno tahay u qaadista hanti hawo leh dabayshu.
Si aad si fiican ugu fahamno fikraddan, waxaan siineynaa tusaalayaal ku saabsan ku-diritaanka iyo qabow labadaba. Soo-dhaweynta diirran waa kuleylka ay dabayshu u qaaddo meel kale. Taas bedelkeeda, qabatin qabow waa u qaadis qabow meelo kale. Si kastaba ha noqotee, labaduba waa gaadiid tamar tan iyo, inkasta oo hawadu ku jirto heer-kul hoose, wali waxay leedahay tamar.
Saadaalinta cimilada, ereyga xayeysiintu wuxuu loola jeedaa daabulidda baaxadda ay bixiso qaybta jiifka ah ee dabayshu. Haddii aan leenahay qabow qabow, waxay u janjeersataa dhanka diiran diiran. Marka ay jirto xayeysiis diirran, waxay ku dhacdaa carrada iyo badaha qabow iyo qaboojinta ayaa ka soo baxda xagga hoose.
Sababaha keena uumiga
Waxaa jira dhowr nooc oo uumiga uumiga biyaha. Midka hore waa shucaac, kan labaadna waa advection. Uumiga biyaha sidoo kale waa la isku kaydin karaa iyadoo la isku daro miisaanka hawo iyo qaboojinta balaadhinta adiabatic. Tan dambe ayaa sabab u ah sameynta cufnaanta daruuraha ugu weyn.
Qaboojinta xayeysiinta, cufan hawo diiran oo qoyan ayaa loo qaadayaa si siman, iyadoo lagu darayo dusha qabow ama hawo.. Xiriirka ka dhexeeya cajiinka diiran iyo kan qabow awgood, heerkulka hawada ee cajiinka diiran ayaa hoos u dhacaya si uu ula mid noqdo kan qabow. Sidan daruurtu waxay ku bilaabmaysaa inay sameysmo, ilaa iyo inta hoos u dhaca heerkulka cufnaanta diiran uu gaarayo dhibicda sayaxa oo uu ku qooqmayo biyo.
Qaboojinta shucaaca waxay dhacdaa marka dhulku kululeeyo qorraxda. Lakabka ugu dhow dusha sare wuxuu bilaabaa inuu kululeeyo natiijada. Sababtaas awgeed, goobooyin hawo kulul ayaa la sameeyay oo, cufnaanta hoose awgeed, waxay u egtahay inay kor u kacdo illaa ay ka buuxiso lakabyada ugu sarreeya uguna qabow. Markay gaaraan lakabyada sare, heerkulku wuxuu bilaabmaa inuu hoos u dhaco waxayna noqdaan kuwo dheregsan, isku uruursan oo sameeya daruur.
Waxay u sabab tahay kala duwanaanta heerkulka sababtoo ah hoos u dhaca cadaadiska jawiga markii qofku sare u kaco. Qaar badan oo ka mid ah durdurrada taagan waxay wax ka beddeli karaan qaboojintan, oo sidoo kale loo yaqaanno kuleylka kuleylka ee deegaanka.
Marka hawadu kacdo, cadaadiska jawiga ayaa hoos u dhaca. Sababtaas awgeed, dhaqdhaqaaqa iyo isku-dheelitirka mootooyinka ayaa sidoo kale yaraanaya, si hawadu u qaboojiso. Sida caadiga, badiyaa waxay soo degtaa qiyaastii 6,5 digrii kiiloomitir kasta oo dherer ah.
Haddii hawadu qalalan tahay, hoos u dhaca heerkulka ayaa aad uga sarreeya (qiyaastii 10 darajo oo kiiloomitir kasta oo dherer ah). Taas bedelkeeda, haddii hawadu buuxdo, soo degitaankiisu wuxuu noqonayaa kaliya kiiloo mitir 5 digrii.
Daruuraha waxay ka kooban yihiin qaybo biyo ah oo aad u yar oo fiican, baraf ama isku dar ah labadaba. Waxay ku samaysmaan isku uumiga uumiga biyaha ee jawiga. Tani waxay keentaa xasaasiyad qabowga looga soo qaado daruuraha loona wareejiyo jawiga intiisa kale oo lagu faafiyo.
Isbeddelka heerkulka sababo la xiriira
Qabsashadu waxay leedahay cutubyo heerkul ah oo loo qaybiyay unugyo waqti ah. Waxay tilmaamaysaa kala duwanaanta kuleylka ee dhibic soo martay sababtoo ah imaanshaha dabaysha oo hawo ku qaadeysa heerkul ka duwan.
Haddii, tusaale ahaan, barta aan ka cabirayno hawadu ay ka timaaddo gobol qabow, waxaan la kulmi lahayn qaboojin iyo ka-qaadashada heerkulku waxay noqonaysaa lambar taban oo noo sheegi doona sida saxda ah inta darajo ee halbeegga heerkulku ka dhacayo.
Qaboojinta hawadu waxay u dhici kartaa sababo kala duwan awgood:
Kuleylka dhulka dushiisa awgeed isdabamarin bilaash ah waxaa soo saara falaaraha qorraxda.
Erayga dhulka, Sababtoo ah kor u kaca lakabyada hawada si looga gudbo buurta, isu-dirid khasab ah ayaa dhacda.
Hawada ayaa ku qasabtay inay u kacdo agagaaraha dhinacyada hore iyo kuleylka, waxay soo saartaa dhaqdhaqaaq jiifa oo hawo qabow, soo saaray dhaqdhaqaaqa jiifka ah hawo diiran si ay kor ugu kacdo.
Sidaad arki karto, xayeysiintu waa shay aad muhiim u ah in lagu xisaabtamo saadaasha hawada. Waa xaalad deggan marka ay timaaddo saadaasha saadaasha hawada iyo in la ogaado dhaqdhaqaaqa iyo xasilloonida jawiga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Adveve